J. Tkach - Worldwide Church of God Switzerland ဆွစ်ဇာလန်မှအလုပ်သမားစာ
သင်၏အခြေအနေမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာများမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သနားကြင်နာတတ်သောဘုရားသခင်သည်သစ္စာစောင့်သိကာကျွန်ုပ်တို့၏အနန္တတန်ခိုးရှင်၊ မေတ္တာနှင့်ပြည့်စုံသောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်။ ပေါလုရေးသားခဲ့သည့်အတိုင်းမည်သည့်အရာကမျှဘုရားသခင်ထံမှကျွန်ုပ်တို့ကိုမဖယ်ရှားနိုင်သကဲ့သို့သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လည်းမကင်းစေနိုင်ပါ။ ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်နိုင်သလား။ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုလား။ ငတ်မွတ်နေတာလား ဆင်းရဲမွဲတေမှု? အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအကြမ်းဖက်သေခြင်းလော။ သန့်ရှင်းသောကျမ်းစာတွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အမှန်တကယ်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံရသည်။ သခင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နေရာတိုင်းတွင်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရပြီးသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်သိုးကဲ့သို့သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသည်။ သို့သော်…
ကျွန်ုပ်သည်ဤလတွင်အငြိမ်းစားယူနေသောကြောင့်ဤစာသည် GCI တွင် ၀ န်ထမ်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးလစဉ်စာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ရာထူးသက်တမ်းကိုဥက္ကpresident္ဌအဖြစ်ကျွန်ုပ်၏သက်တမ်းကိုပြန်လည်စဉ်းစားသောအခါဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသနားတော်မူသောကောင်းချီးများစွာကိုသတိရစေသည်။ ဤကောင်းချီးများထဲမှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏နာမည်ဖြစ်သော Grace Communion International နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြောင်းအလဲကိုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြင့်ဖော်ပြသည်။ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျေးဇူးတော်အခြေပြုယုံကြည်ခြင်းအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်လာသည်။
ယေရှုသည် သူ၏အသက်၊ အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သမျှ၊ ထိုက်တန်သည် သို့မဟုတ် စိတ်ကူးပင်ကြည့်နိုင်သည့်အရာထက် များစွာသာလွန်သောတန်ဖိုးတစ်ခုပေးခဲ့သည်။ တမန်တော်ပေါလုက အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြခဲ့သည်– “မှန်ပါသည်၊ ငါ၏သခင်ယေရှုခရစ်အား ပြင်းပြသောအသိပညာကို ထိခိုက်စေသည်ဟု ငါယူဆနေသေးသည်။ အကြောင်းမူကား၊ ဤအရာအလုံးစုံတို့သည် ငါ့အား ဒဏ်ခတ်၍ ခရစ်တော်ကို အောင်နိုင်စေခြင်းငှာ အညစ်အကြေးဟု ငါမှတ်ယူ၏။” (ဖိ၊ 3,8) ခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် အသက်ရှင်၍ နက်ရှိုင်းသော ဆက်ဆံရေးတစ်ခုတွင် အနန္တ-မရေမတွက်နိုင်သော တန်ဖိုးရှိကြောင်း ပေါလုသိခဲ့သည်။
ပရောဖက်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်သူ သို့မဟုတ် သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်ရက်ကို တွက်ချက်နိုင်သည့်သူ အမြဲရှိလိမ့်မည်။ Nostradamus ၏ပရောဖက်ပြုချက်များကို Torah နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်ဟုပြောနိုင်သောရဗ္ဗိတစ်ဦး၏အကောင့်တစ်ခုကိုမကြာသေးမီကကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သည်။ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင် ယေရှု ပြန်လာမည်ဟု အခြားသူတစ်ဦးက ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ 2019 နေရာယူမည်။ ပရောဖက်ပြုချက်ချစ်သူများစွာသည် သတင်းအသစ်နှင့် သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်ကို ချိတ်ဆက်ရန် ကြိုးစားကြသည်။ Kark Barth သည် လူတို့အား ကျမ်းစာ၌ ခိုင်မြဲစွာ ကျောက်ချ ထားရန် သတိပေးခဲ့သည်..။
နှစ်သစ်တစ်ခုထပ်မံပေါ်ပေါက်လာသည်။ လူများစွာသည်နှစ်သစ်ကူးအတွက်ကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကျန်းမာရေးကိစ္စဖြစ်သည် - အထူးသဖြင့်အားလပ်ရက်များအတွင်းစားပြီးသောက်ပြီးနောက်အားလုံး။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူများသည်အားကစားများပိုမိုပြုလုပ်ရန်၊ သကြားလုံးနည်းနည်းစားရန်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်လိုသောဆန္ဒရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းမှာဘာမှမမှားပါသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ခရစ်ယာန်များသည်ဤချဉ်းကပ်မှုတွင်တစ်ခုခုမရှိကြပါ။
ဤဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့စွမ်းအားနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်၊ တကယ်တော့ ...
ထာ၀ရဘုရားသခင်၏ သားတော်ယေရှုသည် လူဖြစ်လာသည်။ ဒီလိုမဖြစ်ဘဲနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုတာ မရှိနိုင်ပါဘူး။ တမန်တော်ယောဟန်က ဤသို့ဆိုသည်– ဤနည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကို သင်တို့သိမှတ်သင့်သည်– ယေရှုခရစ်သည် လူ့ဇာတိသို့ကြွလာသည်ဟု ဝန်ခံသောဝိညာဉ်တိုင်းသည် ဘုရားသခင်ထံမှဖြစ်၏။ ယေရှုကို မဝန်ခံသော ဝိညာဉ်တိုင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ ထိုမှတပါး သင်တို့ကြားရသော အန္တိခရစ်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ကြွလာ၍ ယခု ဤလောက၌ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။1. ဂျို 4,2-3) ။
ဘုရားသခင့်အံ့သြဖွယ်ခွင့်လွှတ်မှုသည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်မည်မျှတကယ့်ကိုသဘောပေါက်နားလည်ရန်ပင်ခက်ခဲကြောင်းဝန်ခံရမည်။ ဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုအစ မှစ၍ သူ၏ရက်ရောသောလက်ဆောင်အဖြစ်၊ သားတော်မှတစ်ဆင့် ၀ ယ်ယူထားသောခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်းလုပ်ရပ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ အထွတ်အထိပ်ကားတိုင်၌အသေခံခြင်းဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရရုံသာမကပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းခံရသည် - ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင် Triune ဘုရားနှင့်“ တူညီ” ခဲ့သည်။
သူ၏“ အပြစ်ဖြေခြင်း - ခရစ်တော်၏ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်လုပ်ငန်း” စာအုပ်တွင် [ဂျာမန် - ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး - ခရစ်တော်၏ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်လုပ်ငန်းတော်] တွင် ...
စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင်ဂျူးလူမျိုးများသည်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်၊ အဓိပ္ပါယ်များစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်လူတစ် ဦး သည်နှစ်စဉ်သံသရာ၏အစကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်၊ အာဒံနှင့် Eve ၀ တို့၏ဖန်ဆင်းခြင်းကိုဂုဏ်ပြုသည့်အပြင်အချိန်ကာလ၏အစပါဝင်သောစကြဝuniverseာ၏ဖန်တီးမှုကိုလည်းလည်းဂုဏ်ပြုသည်။ ငါအချိန်အကြောင်းကိုဖတ်တဲ့အခါငါအချိန်ကိုလည်းအဓိပ္ပာယ်များစွာရှိပါတယ်သတိရပါ။ ၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုမှာထိုအချိန်ကာလသည်ဘီလျံနာများနှင့်သူတောင်းစားများပိုင်ဆိုင်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တစ်နေ့လျှင်စက္ကန့် ၈၆,၄၀၀ ရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုမသိမ်းဆည်းနိုင်ပါက (အချိန်ကိုလွန်။ မထုတ်နိုင်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်း။ မရပါ) ...
ဖရီဒရစ်နစ်ရှေး (၁၈၄၄-၁၉၀၀) ကိုခရစ်ယာန်ဘာသာကိုရှုတ်ချဝေဖန်မှုများကြောင့်“ ဘုရားမဲ့ဝါဒီ” အဖြစ်လူသိများလာသည်။ သူကခရစ်ယာန်ကျမ်းစာသည်အထူးသဖြင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအလေးထားသောကြောင့်ပုပ်ရဟန်းမင်း၊ အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်းနှင့်လက်စားချေခြင်း၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။ သူသည်ဘုရားသခင်၏တည်ရှိမှုကိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟုစတင်စဉ်းစားမည့်အစားသူသည်“ ဘုရားသခင်သေပြီ” ဟူသောသူ၏ကျော်ကြားသော“ ဘုရားသခင်သေပြီ” ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ သူသည်ရှေးခေတ်သေလွန်သောယုံကြည်ခြင်းဟုခေါ်ဆိုသောရိုးရာခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်အားအစားထိုးရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုတွင်အံ့ဖွယ်စကားလုံးကိုအတော်လေးပေါ့ပေါ့တန်တန်အသုံးပြုကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အကယ်၍ အသင်းတစ်သင်းသည်အနိုင်ရသည့်ရည်မှန်းချက်ကိုဘောလုံးပွဲကိုတိုးချဲ့ခြင်းဖြင့်မီတာ ၂၀ အကွာအဝေးဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းဖြင့်ဂိုးသွင်းနိုင်ပါကရုပ်မြင်သံကြားဝေဖန်ရေးသမားအချို့သည်အံ့ဖွယ်အမှုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မည်။ ဆပ်ကပ်ဖျော်ဖြေမှုတွင်ဒါရိုက်တာသည်အနုပညာရှင်တစ် ဦး ၏လေးဆသောအံ့ဖွယ်လက္ခဏာကိုတွေ့ရသည်။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကအံ့ဖွယ်အမှုတွေမဖြစ်နိုင်ဘူး၊
၎င်းကိုအတွေးအခေါ်ပညာရှင်များနှင့်ဓမ္မပညာရှင်များအကြားစိတ် - ခန္ဓာကိုယ်၏ပြproblemနာ (ခန္ဓာကိုယ် - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာ) ဟုလည်းခေါ်သည်။ ၎င်းသည်မော်တာညှိနှိုင်းမှုပြaနာမဟုတ်ပါ (ခွက်တစ်ခုမှသောက်ခြင်းတစ်စုံတစ်ရာကိုမဖိတ်ခြင်း၊ လှဲချပစ်ခြင်းမပြုခြင်းကဲ့သို့) အဲဒီအစားမေးခွန်းကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလား၊ သို့မဟုတ်အခြားနည်းဖြင့်ပြောရလျှင်လူတို့သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သက်သာလော၊ သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ၀ ိညာဉ်ပေါင်းစပ်မှုတို့လား။
သမ္မာကျမ်းစာသည်စိတ် - ခန္ဓာကိုယ်၏ပြproblemနာကိုတိုက်ရိုက်မဖြေရှင်းသော်လည်း၊
တာမီနဲ့ကျွန်တော်လေယာဉ်ကွင်းကိုစောင့်နေတုန်းအိမ်ကိုမကြာခင်လေယာဉ်စီးဖို့ရောက်လာကြတယ်။ ထိုင်နေတဲ့ထိုင်ခုံနှစ်ခုံထိုင်နေတဲ့ထိုင်နေသောလူငယ်တစ်ယောက်ကိုသတိပြုမိလိုက်သည်။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်သူက“ မင်းကို Mr. Mr. Joseph Tkach လား?” ဟုမေးခဲ့သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်နှင့်စကားစမြည်ပြောပြီးသူသည်မကြာသေးမီက Sabbatarian အသင်းတော်မှနှင်ထုတ်ခံခဲ့ရသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာငါတို့စကားပြောဆိုမှုသည်ဘုရားသခင့်တရားတော်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖော်ပြချက်သည်ခရစ်ယာန်များဘုရားသခင့်နားလည်မှုကိုနားလည်ရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ခမည်းတော်နှင့်သားတော်ကဲ့သို့ဘုရားသခင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်အဘယ်ကြောင့်သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူသုံးပါးအနက်မှတစ်ပါးဖြစ်သည်ကိုနားလည်ရန်ခက်ခဲသောယုံကြည်သူများအားရံဖန်ရံခါကျွန်ုပ်စကားပြောပါသည်။ ခမည်းတော်နှင့်သားတော်ကိုပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်ခွဲခြားသိမြင်စေသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်ဖော်ပြသောအရည်အသွေးများနှင့်အပြုအမူများကိုသမ္မာကျမ်းစာတွင်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ထို့နောက်သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရည်ညွှန်းရန်အသုံးပြုသောခေါင်းစဉ်များစွာကိုကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်အကြောင်းယေရှုသွန်သင်ရာကိုငါသွားမယ်။ ဒီထဲမှာ ...
ခွင့်လွှတ်ခြင်း - အဓိကသော့ချက်
သူမကိုအကောင်းဆုံးပေးနိုင်ဖို့ငါ Tammy (ကျွန်တော့်ဇနီး) နဲ့ Burger King (မင်းရဲ့အရသာအတိုင်း) ကိုနေ့လယ်စာစားဖို့၊ ပြီးတော့နို့ထွက်ဖို့နို့ထွက်ဘုရင်မဆီကိုသွားခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကုမ္ပဏီ၏ကြွေးကြော်သံများကိုရက်ရက်စက်စက်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ရှက်ကြောက်သင့်သည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ သို့သော်မက်ဒေါ်နယ်လ်တွင်ပြောသကဲ့သို့ "ငါချစ်တယ်" အခုငါမင်းရဲ့ (အထူးသဖြင့် Tammy!) ခွင့်လွှတ်မှုကိုတောင်းပြီးမိုက်မဲတဲ့ဟာသကိုဘေးဖယ်ထားရမယ်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ခိုင်ခံ့စေခြင်း၏သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ဤသည်အကြားဆက်ဆံရေးသက်ဆိုင်သည် ...
သမ္မာကျမ်းစာပါ စာအုပ် ၆၆ အုပ်အနက်မှတစ်အုပ်ဖြစ်သော နေဟမိကျမ်းသည် သတိပြုမိမှုအနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင် Psalter ကဲ့သို့သော နှလုံးသားလှသောဆုတောင်းများနှင့် သီချင်းများမပါဝင်ပါ၊ ကမ္ဘာဦးကျမ်းကဲ့သို့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ဖန်တီးမှုမှတ်တမ်းမရှိ (1. မောရှေ) နှင့် ယေရှု၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ သို့မဟုတ် ပေါလု၏ ဓမ္မပညာ မရှိပါ။ သို့သော်၊ ဘုရားသခင်၏မှုတ်သွင်းခံနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ရွက်လွှင့်သောအခါတွင် ၎င်းကို အလွယ်တကူ လျစ်လျူရှုနိုင်သော်လည်း၊ အထူးသဖြင့် စစ်မှန်သော ပေါင်းစည်းမှုနှင့် စံနမူနာပြုနေထိုင်မှုအကြောင်း ဤစာအုပ်မှ ကျွန်ုပ်တို့ အများကြီး သင်ယူနိုင်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် "ထိုအမျိုးသမီးကကျွန်ုပ်အားပုံရသည် [အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဆန္ဒပြမှုများကိုအလွန်အကျွံအလွန်အကျွံချီးမွမ်းခဲ့သည်" "ဟူသောလိုင်းကိုရှိတ်စပီးယား၏ Hamlet မှမကြာခဏကိုးကားပြီးအခြားသူများအားမမှန်ကန်သောအရာတစ်ခုခုအားအခြားသူများအားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ဖော်ပြနေသည်။ ဘုရားမဲ့ဝါဒီဆိုတာဘာသာတရားတစ်ခုလို့ဆန္ဒပြတဲ့ဘုရားမဲ့ဝါဒီတွေရဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါဒီစကားစုကိုသတိရမိတယ်။ အချို့သောဘုရားမဲ့ဝါဒီများကသူတို့၏ဆန္ဒပြမှုကိုအောက်ပါဘာသာရေးဆိုင်ရာနှိုင်းယှဉ်မှုများဖြင့်ထောက်ခံကြသည်။
ဘုရားမဲ့ဝါဒသည်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်ပါက“ ဆံပင်ပြောင်ခြင်း” သည်ဆံပင်အရောင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအသံထွက်နေသော်လည်းတစ်ခုသာရှိသည်။
မယုံကြည်သူများကိုသင်ဘယ်လိုထင်မြင်မိသနည်း။ ငါထင်တာကငါတို့အားလုံးစဉ်းစားသင့်တဲ့မေးခွန်းပဲ! အမေရိကန်အကျဉ်းထောင်အဖွဲ့ ၀ င်နှင့် Breakpoint ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတည်ထောင်သူ Chuck Colson ကဤမေးခွန်းကိုတစ်ချိန်တည်းနှိုင်းယှဉ်စွာဖြေကြားခဲ့သည်။ မျက်မမြင်တစ် ဦး သည်သင်၏ခြေထောက်ပေါ်သို့တက်သွားလျှင်သို့မဟုတ်သင်၏ရှပ်အင်္ကျီပေါ်တွင်ကော်ဖီပူပြင်းလျှင်သင်သူ့ကိုစိတ်ဆိုးမည်လော။ သူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောသည်မှာမျက်မမြင်တစ် ဦး သည်သူရှေ့တွင်ရှိသောအရာကိုမမြင်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
နှစ်စဉ်2ရက်နေ့5. ဒီဇင်ဘာလတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် အပျိုစင်မာရီမှ ဖွားမြင်သော ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုကို ဖွားမြင်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် မွေးသက္ကရာဇ်အတိအကျနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်တစ်စုံတစ်ရာ မပါဝင်ပါ။ ယေရှု၏မွေးဖွားခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ကျင်းပသည့်အခါ ဆောင်းရာသီတွင် ဖြစ်မလာနိုင်ပေ။ ရောမမြို့သားတွေကို အခွန်စာရင်းမှာ စာရင်းသွင်းဖို့ ဧကရာဇ်သြဂတ်စတပ်စ်က အမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့ လုကာ သတင်းပို့တယ်။ 2,1ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည့် ယောသပ်နှင့် မာရိ အပါအဝင် “တစ်ဦးစီသည် စာရင်းသွင်းရန် မိမိမြို့သို့သွား” (လု 2,3စာ-၅)။ ပညာရှင်အချို့သည် ယေရှု၏မွေးနေ့အစစ်အမှန်ကို ထိုနေရာတွင်...
ငါ့ကိုသိသူတိုင်းကျွန်ုပ်သည်ရှားလော့ဟုမ်းစ်၏ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများစွာဖြစ်ကြောင်းကိုသိသည်။ ငါကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချင်သည်ထက်ပို Holmes ကုန်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်သည်။ ငါလန်ဒန်ရှိ 221b Baker Street ရှိရှားလော့ဟုမ်းစ်ပြတိုက်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာလည်ပတ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်အကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်များစွာကိုကြည့်ရတာကျွန်တော်တကယ်ပျော်ပါတယ်။ ဘီဘီစီကထုတ်လွှင့်တဲ့ဘီနစ်ဒစ်ကာဘာဘတ်ခ်ျဟာဘီဘီစီကိုထုတ်လွှင့်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဘီဘီစီထုတ်လွှင့်မှုဇာတ်လမ်းအသစ်တွေကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာဂျူးပွဲတော်နေ့ဖြစ်သော Yom Kippur (ဂျာမန် - အပြစ်ဖြေခြင်းနေ့) တွင်အစာရှောင်ခဲ့သည်။ အဲဒီနေ့မှာအစာနဲ့အရည်တွေကိုတင်းကြပ်စွာကြိုတင်ပြီးဘုရားသခင်နဲ့ပြန်လည်သင့်မြတ်ခဲ့တယ်လို့မှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ဤမှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်ကိုမှတ်မိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြခဲ့သမျှမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ Yom Kippur ကိုအစာရှောင်ရန်ဟူသောရည်ရွယ်ချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်မှုများအားဖြင့်အောင်မြင်ရန်ဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်း (သား - ung [= သားများအဖြစ်မွေးစားခြင်း၊ Ü၏မှတ်စုများ)) တွင်ပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာသာရေးဆိုင်ရာကျေးဇူးပြုခြင်းနှင့်အကျင့်ကျင့်ခြင်းကိုကျင့်သုံးခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလတွင် (ယခုနှစ်တွင် ထူးခြားသည်။ 3. အောက်တိုဘာလ [ဃ။ Üs]) ဟေဗြဲဘာသာဖြင့် “နှစ်၏ဦးခေါင်း” ဟူသော ဂျူးလူမျိုးများသည် နှစ်သစ်ကူးနေ့ကို ကျင်းပကြသည်။ နှစ်၏ဦးခေါင်းပုံဆောင်သည့် ငါးခေါင်းတစ်ပိုင်းကိုစားကာ ဂျူးလူမျိုးများ၏ဓလေ့ထုံးတမ်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ “ကောင်းသောနှစ်ဖြစ်ပါစေ! ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ၊ Rosh Hashanah ၏ပွဲနေ့နှင့် ဘုရားသခင်သည် လူကိုဖန်ဆင်းခဲ့သော ဖန်ဆင်းခြင်းရက်သတ္တပတ်၏ ခြောက်ရက်မြောက်နေ့ကြားတွင် ဆက်စပ်မှုရှိသည်။
ဟေ​ဗြဲ​ကျမ်း​စာ​၌​လည်း​ကောင်း၊ 3. မောရှေကျမ်း ၂3,24 နေ့ကို "Sikron Terua" လို့ သတ်မှတ်ရင်...
ဘုရားသခင်ကို ၀ င်ရောက်ကူညီပေးပါလို့တောင်းပန်လိုက်တဲ့အခါမင်းဟာစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမြင်ဖူးပြီထင်တယ်။ သင်သည်အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုအတွက်ဆုတောင်းခဲ့ဖူးသော်လည်းအကျိုးမရှိ အဆိုပါအံ့ဖွယ်အကောင်အထည်မပေးခဲ့ပါဘူး။ လူတစ် ဦး ၏ကုသမှုအတွက်ဆုတောင်းချက်များဖြေကြားခံရကြောင်းသင်သိရှိရ။ သင် ၀ မ်းသာမိသည်ဟုလည်းကျွန်ုပ်ယူဆပါသည်။ အနာပျောက်အောင်ဆုတောင်းပေးပြီးတဲ့နောက်နံရိုးတွေပေါက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုငါသိတယ်။ ဆရာဝန်ကသူမကို“ ဘာပဲလုပ်လုပ်ဆက်လုပ်ပါ ဦး” လို့အကြံပေးခဲ့တယ်။ ငါတို့အများစုသိကြတဲ့အတွက်နှစ်သိမ့်မှုနဲ့အားပေးမှုခံစားခဲ့ရတယ် ...
ospelဝံဂေလိတရား - ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုလား။
သူ၏အစောပိုင်းရုပ်ရှင်များတွင်ဂျွန်ဝိန်းကအခြားသတ္တိရှိသောသူအား“ ငါသံကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုမကြိုက်ဘူး၊ မင်းမှားနေပြီဆိုရင်နင်းမယ်” ဟုပြောခဲ့သည်။ ချာ့ချ်များသည်မတော်လျော်သောအသုံးပြုခြင်းဖြင့်theဝံဂေလိတရားကိုမည်သို့ပျက်စီးစေနိုင်သည်ကိုစဉ်းစားပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်များ၏အထူးကြပ်မတ်မြှင့်တင်ရေးအဖြစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတိတ်ကာလကကျွန်ုပ်တို့၏တည်ထောင်သူသည်အရောင်းအ ၀ ယ်ကောင်းသည့်နေရာတစ်ခုကိုရှာ။ ကျွန်ုပ်တို့ကို“ စစ်မှန်သောဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုတည်း” ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဒီအလေ့အကျင့်ဟာသမ္မာကျမ်းစာကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျော ...
မိခင်ဖြစ်ခြင်းသည်ဘုရားသခင့်ဖန်ဆင်းခြင်းတွင်အကြီးမားဆုံးသောအမှုတော်တစ်ခုဖြစ်သည် မိခင်များနေ့အတွက်ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်ယောက္ခမကိုဘာပေးရမယ်ဆိုတာကိုမကြာသေးခင်ကငါတွေးမိတဲ့အခါအဲဒါပြန်ပေါ်လာတယ်။ သူမကကျွန်မရဲ့အစ်မဖြစ်ရတာဘယ်လောက်ပျော်တယ်ဆိုတာကိုညီအစ်မတွေနဲ့ကျွန်မကိုပြောပြတဲ့အခါအမေပြောတာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိသေးတယ်။ ငါတို့ကိုမွေးဖွားပြီးနောက်သူသည်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကြီးမြတ်မှုကိုပြန်လည်နားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မည်။ ကျွန်မတို့ကိုယ်ပိုင်ကလေးများမွေးဖွားလာတဲ့အခါနားလည်မှသာစတင်နားလည်နိုင်ပါပြီ။ ကျွန်တော့်ဇနီးတီမီကနာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့ရသည့်အခါကျွန်ုပ်မည်မျှအံ့အားသင့်ခဲ့သည်ကိုမှတ်မိနေဆဲဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဖေဖော်ဝါရီလတိုင်း၌သမိုင်းကြောင်းလကိုအခမ်းအနားကျင်းပသည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းအာဖရိကန်အမေရိကန်များမှကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်၏ကောင်းကျိုးအတွက်အထောက်အကူပြုခဲ့သောအောင်မြင်မှုများမြောက်များစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ပြုကြသည်။ ကျွန်စနစ်နှင့်အသားအရောင်ခွဲခြားခြင်း မှနေ၍ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအထိမျိုးဆက်ပေါင်းများစွာခံစားနေရသောဆင်းရဲဒုက္ခများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကျင်းပသည်။ ဤလတွင်ကျွန်ုပ်ချာ့ချ်တွင်မကြာခဏသတိမမူမိသောသမိုင်းကြောင်းရှိကြောင်းအစောပိုင်းအာဖရိကန်အမေရိကန်ချာ့ချ်များမှသိရှိခဲ့သည်။
သူ၏ဧဝံဂေလိတရားအဆုံးတွင် တမန်တော်ယောဟန်၏ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောမှတ်ချက်စကားများကို သင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်– “ဤစာအုပ်တွင်မရေးထားသော အခြားနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကို ယေရှုသည် တပည့်တော်များရှေ့၌ ပြုတော်မူခဲ့၏။ တခြား​သူ​က ရေး​ထား​တဲ့​စာအုပ်​တွေ​ကို ကမ္ဘာ​က ဆုပ်​ကိုင်​လို့​မ​ရ​ဘူး​လို့ ကျွန်​တော်​ထင်​တယ်” (ယော၊ ၂၀:၃၀၊ ၂။1,25) ဤမှတ်ချက်များကို အခြေခံ၍ ခရစ်ဝင်ကျမ်း လေးစောင်ကြား ခြားနားချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ဖော်ပြထားသော ဖော်ပြချက်များသည် ယေရှု၏အသက်တာ၏ ပြီးပြည့်စုံသော ခြေရာများအဖြစ် မရေးထားကြောင်း ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
ငါခရီးသွားတဲ့အခါမကြာခဏ Grace Communion International ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ တစ်ခါတလေနောက်ဆုံးကောင်းချီးပေးပါစေလို့တောင်းဆိုခံရတယ်။ တောကန္တာရ၌ (အီဂျစ်ပြည်မှထွက်ခွာပြီးနောက်၊ ကတိထားရာပြည်သို့မ ၀ င်မီ) Israelသရေလလူတို့အားသူပေးခဲ့သောအာရုန်၏ကောင်းချီးကိုကျွန်ုပ်မကြာခဏငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်ဘုရားသခင်သည်Israelသရေလလူမျိုးအားပညတ်တရားကိုမည်သို့စောင့်ထိန်းရမည်ကိုသင်ကြားပေးခဲ့သည် လူများသည်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ကာ passive ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းယေရှုသည် “ငါတို့ကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောအမှု၌ စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းခံရသော်လည်း အပြစ်မရှိဘဲ” ရှိကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာက ဖော်ပြသည်။ 4,15) ဤသိသာထင်ရှားသောအမှန်တရားသည် သခင်ယေရှု၏ လူ့ဇာတိခံယူခြင်းနှင့်အတူ ၎င်းကဲ့သို့ပင် ခရစ်ယာန်အယူဝါဒကို သမိုင်းဝင်ခရစ်ယာန်အယူဝါဒတွင် ထင်ဟပ်စေသည်။
vicarius လက်တင်စကားလုံးသည်“ တစ်စုံတစ် ဦး အတွက်ကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်” ကိုဆိုလိုသည်။ သူသည်လူ့ဇာတိခံယူခြင်းဖြင့်ထာဝရဘုရားသခင်၏သားတော်သည်မိမိ၏ဘုရားကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေစဉ်လူသားဖြစ်လာသည်။ ဤအခြေအနေတွင်ကယ်လ်ဗင်သည်“ အံ့ဖွယ်အပြန်အလှန်လဲလှယ်ခြင်း” အကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
သက်တမ်းအရင့်ဆုံးသက်ရှိသတ္တ ၀ ါအကြောင်းကိုမေးမြန်းသောအခါအချို့သည်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀၀ သက်တမ်းရှိ Tasmanian pines သို့မဟုတ် ၄၀,၀၀၀ နှစ်ရှိချုံနွယ်များကိုရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ အခြားသူများကမူစပိန်ဘာလေရီကျွန်းစု၏ကမ်းရိုးတန်းရှိနှစ် ၂၀၀,၀၀၀ ရှိသောပင်လယ်ရေညှိကိုပိုမိုစဉ်းစားမိနိုင်သည်။ ဤအပင်များသည်ဟောင်းနွမ်းသည်ထက်ပိုမိုအသက်ကြီးသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းမှာထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင်သက်ရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ ဘုရားသခင်၏အနှစ်သာရသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ပြသည်။ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ (သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ) ၏ပုဂ္ဂိုလ်များစပ်ကြားရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်ရှိပြီးဖြစ်သည်။
ယေရှု - ဒဏ္Justာရီလား။
ထွန်းနှင့်ခရစ်စမတ်တို့သည်ရောင်ပြန်ချိန်များဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုနှင့်သူ၏လူ့ဇာတိခံယူခြင်းကိုထင်ဟပ်စေသောအချိန်၊ ၀ မ်းမြောက်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ကတိတော်များပေးသောအချိန်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိလူများကသူ့မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းပြောပြသည်။ တစ်ခုပြီးတစ်ခုနောက်ခရစ်စမတ်ကာလာတစ်ခုသည်အီကျော်မှကြားနိုင်သည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများတွင်နတ်ဘုရားပွဲများကျင်းပခြင်း၊ cantatas နှင့် choir singing များဖြင့်ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးသည်မေရှိယသခင်ယေရှုနှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တရားကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးလုံးလေ့လာလိမ့်မည်ဟုထင်မည့်အချိန်၏အချိန်ဖြစ်သည်။
ဒီစိတ်ပျက်ဖွယ်ပုံသေနည်းကခဏလေးပျော်ရွှင်မှုရစေပေမဲ့ထာဝရတည်တံ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမရခဲ့ပါဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီးဒီအမှားမလုပ်ပါနဲ့ ကျန်တဲ့လူတွေလိုပဲငါရယ်ရတာပျော်တယ်။ ဒါကြောင့်ကားလ်ဘာ့တ်ရဲ့“ ရယ်မောပါ၊ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်အနီးဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုနှစ်ခုလုံးကကျွန်ုပ်တို့ကိုရယ်မောစေသော်လည်းနှစ်ခုကြားအဓိပ္ပါယ်ရှိသောခြားနားချက်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ခဲ့သည့်ခြားနားချက်တစ်ခု ...
တခါတရံကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်စိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့်ဘုရားသခင့်သားတော်၏လူ့ဇာတိကိုခံယူခြင်းခရစ်စမတ်ပွဲတော်သို့သွားကြသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Advent အားခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းစတင်သည့်အချိန်ကိုပြန်လည်ထွန်းကားစေခဲ့သည်။ Advent Adventures ၏တနင်္ဂနွေလေးရက်သည်နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင်စတင်ပြီးယေရှုခရစ်မွေးဖွားခြင်း၏ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကိုကြေငြာသည်။ "Advent" ဟူသောဝေါဟာရကိုလက်တင်ဘာသာရေးစွန့်စားမှုမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး "ကြွလာ" သို့မဟုတ် "ဆိုက်ရောက်ခြင်း" ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုကိုဆိုလိုသည်။ ထွန်းချိန်အတွင်းသခင်ယေရှု၏“ ကြွလာတော်မူခြင်း” သုံးပါးကို (ပုံမှန်အားဖြင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင်) ကျင်းပကြသည်။
လူငယ်ဘဝတုန်းကအာဏာပြတ်တောက်သွားတဲ့အခါရုပ်ရှင်ရုံမှာကျွန်တော်ထိုင်နေတယ်။ အမှောင်ထုထဲတွင်ပရိသတ်သည်ညည်းညူမြည်တမ်းလျက်တစ်စက္ကန့်တိုင်းကုန်သွားသည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကအပြင်ကိုတံခါးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာဖို့ဘယ်လိုသံသယဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာသတိပြုမိခဲ့တယ်။ Light ရုပ်ရှင်သည်ရုပ်ရှင်ရုံထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာပြီးညည်းညူသံနှင့်ကျွန်ုပ်၏သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှာဖွေမှုများသည်လျင်မြန်စွာပြီးဆုံးသွားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မှောင်မိုက်နှင့်မရင်ဆိုင်မှီတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အလင်းကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောထားကြသည်။ သို့သော်အလင်းမရှိဘဲမြင်နိုင်စရာမရှိ။ အခန်းတစ်ခန်းကိုအလင်းထွန်းလင်းပေးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ခုခုကိုသာတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဘယ်မှာလဲ ...
ငါမကြာသေးမီကရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာ parodying ဗီဒီယိုကိုမြင်တော်မူ၏။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည် "It's All About Me" ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသောခရစ်ယာန်ဝတ်ပြုရေး CD အကြောင်းဖြစ်သည်။ ဒီစီဒီတွင်“ သခင်ဘုရားသည်ကျွန်ုပ်၏နာမကိုချီးမြှောက်တော်မူသည်”၊ “ ငါချီးမြှောက်ခြင်း” နှင့်“ ငါကဲ့သို့သောသူမရှိ” သီချင်းများပါရှိသည်။ (ဘယ်သူမှငါနဲ့မတူဘူး) ထူးဆန်း? ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကဝမ်းနည်းဖွယ်အမှန်တရားကိုဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည်ဘုရားသခင်ထက်မိမိကိုယ်ကိုကိုးကွယ်လိုကြသည်။ ငါနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့, ဒီသဘောထားကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုတောင်းသော circuit ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် ...
ငါခရီးသွားသောအခါဒေသခံဘာသာစကားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏နှုတ်ခွန်းဆက်စကားကိုလိုချင်ကြောင်းကိုများစွာသောသင်သိသည်။ ငါရိုးရှင်းသော "ဟဲလို" ထက်ကျော်လွန်။ သွားကြဖို့ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ရံမှာဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့မသိမသာကွဲပြားမှု (သို့) ပရိယာယ်ကငါ့ကိုရှုပ်ထွေးစေတယ်။ ငါကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများနှင့်အနည်းငယ်နှစ်ပေါင်းငါ့အလေ့လာမှုများအတွက်ဂရိနှင့်ဟီဘရူးအချို့သင်ယူခဲ့ကြပေမယ့်အင်္ဂလိပ်ငါ့နှလုံး၏ဘာသာစကားနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်လည်းငါဆုတောင်းသောဘာသာစကားဖြစ်သည်။
ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်းစဉ်းစားသောအခါပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုမှတ်မိသည်။ သူတတ်နိုင်သမျှဆန္ဒရှိသူတစ်ယောက်ရှိ၏ ...
ဘာသာရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။ သို့သော်ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း၌ပင်ဘာသာရေးရေစီးကြောင်းများစွာရှိသည်။ WKG / GCI ကိုဘာသာရေးအသိုင်းအ ၀ ိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်မှန်ကန်သောလက္ခဏာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဘာသာရေးအယူဝါဒကိုဖော်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိက ၀ တ်ဖြစ်သည်။ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအယူဝါဒကိုချာ့ချ်သမိုင်းတစ်လျှောက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသော်လည်းအချို့ကို၎င်းကိုမေ့လျော့သောအယူဝါဒဟုရည်ညွှန်းကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ငါတို့ WKG / GCI အတွက်ကြောင်းအဖြစ်မှန်, တနည်း ...
ချည်နှောင်ထားခြင်းနှင့်သော့ခလောက်များနှင့်ကာထားခြင်းအားဖြင့်နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်အားရေတိုင်ကီထဲသို့မည်သို့ချသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ ထို့နောက်ထိပ်ကိုပိတ်ထားကာနတ်ဝိဇ္ဇာ၏လက်ထောက်သည်ထိပ်တွင်ရပ်။ သူမအပေါ်ခေါင်းဖုံးထားသည့်အထည်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ခဏအကြာတွင်ထိုအထည်သည်ကျသွားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အံ့အားသင့်စရာနှင့် ၀ မ်းမြောက်မှုအတွက်မျက်လှည့်ဆရာသည်တင့်ကားပေါ်တွင်ရပ်နေပြီးသံကြိုးဖြင့်ချည်နှောင်ထားသောသူ၏လက်ထောက်သည်အတွင်း၌ရှိသည်။ ဤရုတ်တရက်နှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော“ အပြန်အလှန်လဲလှယ်မှု” သည်ငါတို့မျက်မှောက်၌ဖြစ်ပျက်နေသည်။ ငါတို့သိတယ် ...
“ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်မမြင်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်မယုံတော့ပါ” ဟုလူတို့ပြောသောအခါကျွန်ုပ်သည်ပျော်စရာရှိသည်။ လူအများကဘုရားသခင်တည်ရှိကြောင်းသံသယဖြစ်ခြင်း၊ သူသည်လူအားလုံးကိုသူ၏ကျေးဇူးတော်နှင့်ကရုဏာတော်၌ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုမကြာခဏပြောတတ်ကြသည်။ မှားယွင်းခြင်းမပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သံလိုက်သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုမတွေ့ရသော်လည်း၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုများမှတဆင့်တည်ရှိကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ထောက်ပြသည်။ လေ၊ ဆွဲငင်အား၊ အသံနှင့်အတွေးပင်လျှင်အလားတူပင်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ စိတ်ကူးမရှိသောအသိပညာ” ဟုခေါ်သောအရာကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်။ ငါထိုကဲ့သို့သောအသိပညာအပေါ်အားကိုးလို ...
ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်! သင်ချစ်ရသူများနှင့်ကောင်းမွန်သောအားလပ်ရက်အနားယူရမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ယခုခရစ်စမတ်ရာသီသည်နောက်ကွယ်တွင်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်သစ်ကူးအလုပ်၌ရုံးခန်းပြန်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်အားလပ်ရက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်အကြံဥာဏ်များဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။ မိသားစုဓလေ့ထုံးစံများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားမကြာခဏသင်ပေးနိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုခဲ့သည်။ အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်လက GCI ဓမ္မဆရာများသည် Grace Communion International ၏ National Gospel Coordinator မှ ဦး ဆောင်သည့် Heber Ticas ဦး ဆောင်သော“ Outside the Walls” ဟုခေါ်သော angel ၀ ံဂေလိသင်တန်းတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်တက္ကဆက်ပြည်နယ် Dallas အနီးရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများဖြစ်သော Pathways of Grace နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သောကြာနေ့တွင်သင်တန်းများစတင်ခဲ့ပြီးစနေနေ့မနက်တွင်ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်းအုပ်ဆရာများသည်အသင်းသားများနှင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအစည်းအဝေးနေရာတစ်အိမ်မှတစ်အိမ်သို့သွားရန် ...